Ama-Strawberry ohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2 > Ukudla ngesifo sikashukela
Ngingakwazi ukudla ama-sitrobheli kashukela?
Izithelo zamahlahla mabhero nezihlahla zezithelo zingabaphakeli abaphambili bezakhi zevithamini nezamaminerali zomzimba. Kubantu abanesifo sikashukela, kubalulekile ukuthi amakhompiyutha anenzuzo alethwa ngokuqhubekayo nangobungako obanele. Amavithamini akhona ku-berry nezithelo uginindela othuthukisa amasosha omzimba, enza lula ukusebenza kwamanyikwe. Ngaphezu kwalokho, eziningi zazo zifaka isandla ekwehliseni noma ekuguquleni okuqukethwe ushukela egazini, njengoba zinikeza ingxenye entsha ye-insulin ohlelweni lokujikeleza kwegazi.
Ukusebenzisa inani elanele le-fiber kungenye isidingo sesifo sikashukela. Ungukufakelwa okusiza “ukuxosha” i-cholesterol “embi” emzimbeni, kuzinzise amazinga kashukela, futhi kuvikele ukukhula kokukhuluphala.
Imaphi amajikijolo avunyelwe ezigulini ezinesifo sikashukela? Lawa ama-blueberries, ama-raspberries, ama-gooseberries, ama-currants ngisho nama-sitrobheli. Onke amajikijolo aqokiwe anezinga le-glycemic eliphansi futhi ngamanani anele ngeke alimaze umuntu ogulayo. Kepha masingakhohlwa ukuthi noma iyiphi imikhiqizo yezitshalo isetshenziswa kahle isha, kunokuba iphathwe ukushisa. Ngaphezu kwalokho, awukwazi ukwengeza uju futhi, ikakhulukazi ushukela.
Hlobo luni lwezithelo engingazidla nesifo sikashukela? Kuvunyelwe ukufaka ama-apula, ithini lamapheya, ama-apricots, amawolintshi kanye namagilebhisi, i-kiwi kanye nolamula ekudleni. Lezi zithelo ngeke ziholele umehluko omkhulu emazingeni kashukela, ngakho-ke ngeke alimaze umuntu onesifo sikashukela. Impela, imiqobelo edliwayo kufanele ihlale inengqondo, futhi ngisho nama-apula avumelekile akufanele adliwe kuma-kilogramu.
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli ohlobo loku-1 nohlobo 2 sikashukela, isifo sikashukela sokukhulelwa?
Isifo sikashukela i-mellitus sivame ukuhlukaniswa ngezigaba ezimbili zezifundo: luhlobo 1, noma isifo sikashukela esincike ku-insulin, nohlobo 2, noma isifo sikashukela esinga-insulin. I-pathologic encike kwi-insulin yasetshenziselwa ukubizwa ngokuthi "ubusha", njengoba ithinteka kakhulu kubantu abaneminyaka engama-20-35. Isifo sikashukela sohlobo 2 sibhekwa njengokujwayelekile, abantu abaningi beminyaka ehlukene bahlupheka ngalolu hlobo.
Imigomo yokudla okunempilo yohlobo 1 no-2 sikashukela ifana kakhulu. Okokuqala, lokhu kungukungafani kwama-carbohydrate asheshayo ngendlela kashukela namaswidi. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukulahla ngokuphelele ama-carbohydrate, ngoba lokhu kuyingxenye edingekayo yenkambo ejwayelekile ye-metabolism. Iziguli ezinesifo sikashukela ziyalwa ukuba ziphinde zigcwalise izitolo zazo ezinoshukela ngokudla izinhlobo ezithile zezithelo namajikijolo, kufaka phakathi ama-sitrobheni.
Kwabanye omama abakhulelwe, umbuzo wokuthi ngabe ama-sitrobheni kashukela angafakwa yini kwimenyu nawo uphuthumayo. Sikhuluma ngabesifazane abatholakale benesifo sikashukela sokuthambisa - lokhu kungukuphazamiseka okubonakala ngesikhathi sokukhulelwa, bese kunyamalala ngokuphepha ngemuva kokuzalwa kwengane. Isizathu salokhu kwephula umthetho wukunciphisa ukuzwela kwezakhiwo zamangqamuzana ukuya ku-insulin, okuchazwa ngokugxuma okubukhali emazingeni e-hormone. Ngemuva kokuzalwa kwengane, izinga le-glucose egazini lihlala liqina, kepha kunengozi ethile yokushintshwa kwesimo sokutholwa kwalesi sifo sibe uhlobo lwesifo sikashukela esigcwele. Ukuvimbela lokhu kuguqulwa kungenzeki, kubaluleke kakhulu ukunamathela ekudleni okukhethekile. Ngaphezu kwalokho, ukudla kuyadingeka ngesikhathi sokukhulelwa, ukuze kungalimazi futhi kuphazamise ukukhula kwe-intrauterine kanye nokukhula kwengane engakazalwa.
Abesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa bavunyelwe ukudla ama-sitrobheli, kepha ngamanani amancane, aze afike ku-400 g ngosuku. Kubaluleke kakhulu ukuthi amajikijolo asha, angabi nama-nitrate nezinye izinto ezinobuthi, ngakho-ke kungcono ukukhetha ama-sitrobheli, ukuphepha kwawo kunokuqiniseka okuqinile.
Njengoba ubona, ama-sitrobheli onesifo sikashukela azosizakala kuphela uma asetshenziswa kahle ngokulinganisa. Amajikijolo okuhlukumeza, afaka ekudleni okungahlanzekile noma okubukeka okusolisayo akufanele futhi kube nabantu abaphilile abangahlushwa yi-endocrine pathologies kanye nesifo sikashukela.
Ama-Strawberry aneshukela aphezulu
Izazi ezingama-Endocrinologists zeluleka ukungeza ama-sitrobheli ekudleni noshukela owandayo egazini, ngoba leli bheri liqukethe inani elikhulu lezinto ezibalulekile ezidingeka kakhulu emzimbeni ogulayo. Yini eminye yemihlomulo yezempilo yama-sitrobheli asendle onesifo sikashukela?
Kuqinisa ukuzivikela komzimba.
Kuthuthukisa isimo semithambo yegazi.
Ivimbela ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis.
Kuthuthukisa izakhiwo zegazi, kuvimbela i-thrombosis.
Iqinisa umfutho wegazi.
Iqoqo elikhulu lama-antioxidants akhona kuma-sitrobheli asheshisa izinqubo ze-metabolic ezingeni lamaselula, livimbela ukunqwabelana kwe-intracellular yezinto ezinobuthi, futhi lilawula amazinga kashukela. Uma ama-sitrobheli esetshenziswa njalo isifo sikashukela, ushukela ungasiza ekunciphiseni isisindo somzimba, wandise umsebenzi wamathumbu, futhi uthuthukise umthamo wokufaka i-mucosa encane yamathumbu.
Ngaphezu kwalokho, ama-sitrobheli yi-ejenti enamandla ye-antiseptic ne-anti-inflammatory. Le mpahla ibalulekile ezigulini ezinesifo sikashukela, ngoba zinokuncipha kwezinqubo zokuphinda zenziwe kabusha, futhi noma ukulimala kwezicubu okuncane kungashintsha kube isilonda eside esilaxayo.
Izinzuzo zama-sitrobheli zesifo sikashukela
Esikhathini esiningi, abantu badukiswa yimithombo yezindaba: odokotela abahlukahlukene bethelevishini, abakhangisi, kanye nama-scammers ajwayelekile.
Ezikrinini zethelevishini namakhasi ezinkundla zokuxhumana, zimemezela obala izingozi zama-sitrobheni kushukela. Konke lokhu kusekelwa yimibandela yezokwelapha efihlakele, ngenxa yokuthi umuntu unokhahlo ngokungadingekile ngokudla futhi aze alimaze impilo yakhe ngokwezinga elithile.
Uma uzijwayela ngezinto zokwenziwa ngabacwaningi baseMelika, ungaqonda ukuthi i-berry ebomvu ebomvu ayigcini nje ngokulinyazwa, kodwa futhi inika inzuzo ethile kwabanesifo sikashukela. Ngakho-ke, ukuba khona kwezithelo kwimenyu yansuku zonke kunciphisa ubungozi bokuhlaselwa izikhathi ezi-2. Izinzuzo zamajikijolo eziguli ezinesifo sikashukela zichazwa ngokwakhiwa okunothile kwama-sitrobheli:
Ngaphezu kwalezi zakhiwo ezinenzuzo, amajikijolo anejusi anezinto ezilwa nokuvuvukala futhi aqukethe umthamo we-vitamin C, othuthukisa izindlela zokuvikela abantu. Lokhu kubaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela, ngoba ngenxa yokunciphisa ukungatheleleki ngisho nezilonda zesikhumba ezincane kunazo zonke zingashintsha zibe izilonda futhi zingaphili isikhathi eside.
Ngingadla ama-sitrobheli amangaki?
Ngisho nalezo ziguli eziqinisekile ngezakhi ezinenzuzo zamajikijolo ane-pathology engathandeki kangako azikwazi ukuthola ukuthi zingakhi izithelo ezingadliwa nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, akekho udokotela ongayedwa ozonikeza impendulo ecacile, ngoba wesaba nje ukuthatha lowo msebenzi. Kepha empeleni, ukubala "umthamo" ovunyelwe akunzima kangako.
Izifundo zemitholampilo ziphakamisa ukuthi ingozi kwabanesifo sikashukela i-carbohydrate elula. Njengomthetho, zibangela ukugeleza kwegazi nokuqunjelwa.
Kepha kuma-sitrobheli, lezi zinto zimbalwa impela. Ingilazi eyodwa egcwele (200g) ibiza cishe amagremu ayi-11 ama-carbohydrate. Kepha ngasikhathi sinye, emisebenzini yezokwelapha kuwumkhuba ukukhipha inani lamaprotheni akule nkomba.
Njengoba izithelo ziqukethe cishe amagremu ama-3 amaprotheni, kuvela ukuthi ama-carbohydrate amajikijolo awekho ngaphezu kwama-gramu ayi-8, uma sikhuluma ngama-sitrobheli aphakathi nendawo. Futhi kwezokwelapha kukhona inkomba okuvela kuyo lapho ukwanda kwengozi yokuwohloka kwengozi kukhula khona.
Ngomkhiqizo ngamunye, le nkomba iyahlukahluka, yamajikijolo, ikakhulukazi, amagremu ayi-14 ama-carbohydrate. Kuyavela ukuthi kuze kufike kumagremu angama-350 amajikijolo amnandi angadliwa nsuku zonke ngaphandle kwengozi empilweni nasenhlalakahleni.
Ungayikhulisa kanjani imihlomulo?
Noma yisiphi isiguli esinohlobo 1 noma isifo sikashukela esi-2 sikhathazekile ngezithelo namajikijolo amnandi. Kodwa-ke, uma ubheka izincomo eziphathelene nokusetshenziswa kwama-sitrobheli, ngeke kube nezinkinga. Odokotela abakaqhamuki nemithetho ethile, kepha kukhona izeluleko ezithile:
Zonke iziguli ezihlushwa i-pathology enjalo ziyazi: kufanele zinamathele ekudleni. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela banqunyelwe ukuba badle ngezingxenye ezincane izikhathi eziyi-6,7 ngosuku. Umthamo ovunyelwe wama-sitrobheni (ama-350 g) kufanele udliwe ngokudla ngakunye noma njengokudla okulula.
Amajikijolo amnandi nawo angafakwa kuma-yogurts anamafutha aphansi, ama-puddings obisi namanye ama-dessert.
Kungcono ukudla ama-sitrobheli okusha ukuze ulondoloze lonke inani lokudla le vithamini yemvelo. Kodwa-ke, ungenza i-diamic jam, noma kunjalo, ushukela kanye nezinye izinambuzane ezivinjelwe akuvunyelwe ngokuphelele kuleli cala. Ama-Strawberry abilisiwe kujusi wawo amahora amaningi. Kuyadingeka ukunakekela ujamu, bese ufaka amajikijolo amasha, njengoba isiraphu ligaywe.
Naphezu kweqiniso lokuthi abantu abanesifo sikashukela bahlinzeka ngama-sitrobheli ngezinzuzo ezinkulu, akunconywa ukuba usebenzise kabi iberry. Musa ukudla ngaphezu kwenani elibekiwe.
Kuyaphawuleka ukuthi ukusetshenziswa kwezithelo ezibomvu zesifo sikashukela kuyimpoqo, naphezu kokungaziwa okuyiphutha. Ama-Strawberry - isitolo sangempela samavithamini, amaminerali nama-antioxidants aletha izinzuzo ezinkulu esigulini.
Izinzuzo kanye nokulimala kwama-sitrobheli asendle kushukela
Ukulinganisa ushintsho ekudleni kungenye yezidingo zokuqala isiguli esinesifo sikashukela. Kodwa-ke, ama-sitrobheli awafakwanga ohlwini lwemikhiqizo enqatshelwe yesifo sikashukela, njengoba enamajikijolo amaningi futhi emnandi kancane, enenkomba ye-glycemic ephansi.
Kunobufakazi bokuthi ama-sitrobheli kwisifo sikashukela azosiza ekuqiniseni amazinga kashukela. Futhi lokhu akumangazi, ngoba enkomishini eyodwa encane yamajikijolo iqukethe okungenani i-3 g ye-fiber.
Ama-Strawberry angamakhalori aphansi kanti ngokwesilinganiso aqukethe ama-kcal angama-45 nge-g 100. Ngemuva kokudla ingilazi eyodwa yamajikijolo, ungathola okungenani i-11 g yamaprotheni, 12 g wama-carbohydrate ne-1 g yamafutha. Phakathi kokunye, ama-sitrobheli angaqhosha ngokuqukethwe okuphezulu kwe-ascorbic ne-folic acid, amavithamini e-B-group, kanye namaminerali amaningi, kufaka phakathi i-magnesium ne-potassium, i-phosphorus kanye ne-iron, iodine ne-calcium, i-zinc, i-cobalt, i-selenium, njll.
Uhlu olubanzi lwezinto eziwusizo lukuvumela ukuthi uvikele umzimba ezingeni lamaselula, uthuthukise inkambiso yezinqubo ezi-oxidative. Okuqukethwe okuphezulu kwama-polyphenols (i-fiber yokudla) kubambezela ukumuncwa kwe-glucose ohlelweni lokugaya ukudla, okunomthelela ekwandeni okuthe xaxa futhi okuthe xaxa kwamazinga kashukela wegazi, ngaphandle kokuqhuma okukhulu.
Kukuziphi izimo lapho umuntu kufanele aqaphele khona ukufaka ama-sitrobheli ekudleni?
Ochwepheshe abakukhuthazi ukudla amajikijolo anesifo sikashukela esiswini esingenalutho, ikakhulukazi uma kunezinkinga ngomgudu wokugaya ukudla - ngokwesibonelo, nge-hyperacid gastritis, ulcer peptic, gastroduodenitis. Ukuqapha kufanele futhi kusetshenziswe uma isifo sikashukela esigulini sihlanganiswa ne-urolithiasis, cystitis, gout. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi unake ikhono eliphakeme le-allergenic yama-sitrobheli: uma isiguli sine-hypersensitivity kanye nokuthambekela kokuphendula komzimba, lapho-ke ukusetshenziswa kwama-sitrobheni kuyathandeka ukunciphisa.
Ama-sitrobheni amahlathi kashukela
Amajikijolo asendle awanambitheki futhi anempilo kunesihlobo sawo esivandeni. Esikhathini sikashukela, izakhi ezinjengefayibha yokudla zivimbela amaconsi kashukela egazi, zisheshise imetabolism futhi zikhuthaze ukuqeda ubuthi. Ukwakheka kwemvelo kwama-sitrobheli asendle kucebile impela: izithelo zimelelwa ngoshukela, i-ascorbic acid, i-pyridoxine, i-carotene, i-thiamine, ama-pectin, ama-tannins nama-flavonoids, ama-asidi e-organic kanye namafutha abalulekile, i-phytoncides. I-phosphate iron, i-manganese, ithusi, i-chromium ne-aluminium nayo ikhona ku-pulp.
I-fiber edingekayo nezinye izinto eziwusizo zama-sitrobheli asendle zingamelana kalula nesilinganiso esilinganiselwe sikashukela, silawule okweqile. Okusemqoka ukuthi ezintweni zokugaya ukudla, ngenxa yefayibha yokudla, ushukela ulahlekelwa yikhono lokungena kalula egazini. Ngakho-ke, ukwanda ushukela kwenzeka kancane, ngaphandle kokuwa okungazelelwe.
Izakhi ze-antioxidant ezikhona kuma-sitrobheli wasendle zivikela ukwakheka kwezakhi zamaselula kusuka ku-oxidation, futhi umphumela we-antiseptic ovela ngaphakathi kwe-berry usheshisa ukuphulukiswa kokulimala kwezicubu ezahlukahlukene, kufaka phakathi amanxeba nezilonda.
Ama-sitrobheli asehlathini esifo sikashukela anconyelwa ukuba adliwe ngenani lika-100 g ngosuku.
Ama-Strawberry esifo sikashukela nezinye izifo: izinzuzo nokulimala
amavithamini A, B, C, E,
amaminerali, ikakhulukazi i-boron, i-potassium, i-fluorine, i-phosphorus, i-magnesium, i-cobalt, isibabule kanye ne-calcium.
Ama-Strawberry aqukethe ngokumangazayo i-fiber eningi, ethambile futhi kulula ukuyigaya. Ngakolunye uhlangothi, okuqukethwe ushukela wemvelo kufanele kukhulunywe, ngenxa yokuthi i-berry inganconyelwa ngokuya ngokudla okuhlukahlukene, ikakhulukazi, lapho kukhawulela futhi kushintshwa ekudleni kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ama-berry aqukethe i-organic acid, ayinike iphunga elihlukile nokunambitheka. Ngeshwa, ngenxa yalawa ma-asidi e-organic, njenge-malic, i-citric, i-quinine, i-oxalic acid ne-salicylic acid, amajikijolo angaba yingozi kwabanye abantu abane-allergies.
Izinzuzo zama-sitrobheli zimelelwa yi-metabolism eyenziwe ngcono kanye nosizo ekwelapheni isifo sikashukela, isifo senhliziyo nemithambo yegazi. Ngaphezu kwalokho, kusiza nge-anemia, gout, izifo zesinye kanye nomgogodla (ikakhulu amatshe), kunomthelela wokulwa nokuvuvukala, kunciphisa umkhuhlane futhi kunciphise izimpawu zomkhuhlane.
Emithini yesintu, isetshenziselwa ukuhlanza ipheshana lesisu nokwenza ngcono imetabolism.
Kuyathakazelisa! Ama-Strawberry akhulisa kakhulu ukusebenza kwezocansi ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-zinc ezinhlanyelweni zezithelo.
Ngingakwazi ukudla ama-sitrobheli onesifo sikashukela?
Yebo, ungakwenza futhi kufanele! Ifanelwe ukufakwa ekudleni komuntu onesifo sikashukela, hhayi ngenxa yokunambitheka kwayo kuphela, kodwa futhi nomphumela ozuzisayo esimweni sempilo somuntu onesifo sikashukela sohlobo 2.
Izithelo ezisanda kuthathwa azinambitheki nje kuphela futhi zinambitheka okuhle, zinama-kilojoule ambalwa, okubenza babe yingxenye yokudla yesifo sikashukela sohlobo 2. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zamajikijolo, ama-sitrobheli aqukethe ushukela omncane kakhulu futhi, ngenxa yalokho, anenani eliphansi lamandla. Inkomishi yamajikijolo iqukethe ama-kcal angama-45 kuphela (188 kJ). Le mali icishe ibe yingxenye yamapula, ngamapharele nakuma-cherries. Leli qiniso liwenza ube umkhiqizo obaluleke kakhulu ngenxa yokuthi isifo sikashukela sohlobo 2 sithinta kakhulu abantu abaningi kakhulu.
Ngokuhambisana nalokhu, ama-sitrobheli nawo angumthombo we-ellagic acid, evimbela ama-carcinogen ekushintsheni amaseli anempilo esiswini. Ngaphezu kwama-sitrobheli, le asidi iqukethe ezinye izithelo ezimbili kuphela - ama-cherries namagilebhisi.
Izinketho Zokupheka Nama-Dosages anconyiwe
Ukhuluma nge-berry njengesengezo esibalulekile ekudleni kwesifo sikashukela, kufanele kuphawulwe ukuthi izinketho zokulungiselela kwayo zihlukahlukene kakhulu. Ukusuka kulo ungenza ujamu, ujamu, ama-compotes ne-jelly. Ngaphezu kwalokho, kukhiqizwa newayini ne-cider kule berry. Ama-dessert amahle kakhulu alungiselelwe kuwo, ngokwesibonelo, okhilimu abahlukahlukene, amasaladi ezithelo, u-ayisikhilimu, isobho, kanye nesobho elibandayo lezithelo. Kungalindeleki futhi kungafanele, ama-sitrobheni futhi asebenza njengesitsha eseceleni sezitsha ezinkulu.
Umthamo wansuku zonke onconywayo we-vithamini C kumuntu okhulile cishe u-60 mg.I-100 g kuphela yama-sitrobheli equkethe ama-40-90 mg we-Vitamin C. Ngakho-ke, inqwaba encane yama-sitrobheni nsuku zonke yanele!
Ama-Strawberry angumthombo ocebile we-potassium ne-manganese. I-Potassium, esebenza njenge-diuretic yemvelo, isiza kakhulu ekususeni ubuthi emzimbeni. I-trace element manganese idlala indima ebalulekile kushukela we-metabolism. Amajikijolo amasha, ngenxa yalokhu, yisidlanzana esifanele seziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, abantu abanempilo bangadla amajikijolo njengokuvimbela isifo sikashukela esimnandi nomsizi omuhle ekudambiseni umzimba.
Ama-Strawberry wesifo sikashukela - i-metabolic syndrome ayinalo ithuba!
Iningi lezifundo ezibhekiswe kumphumela wokuvikela ama-sitrobheli ligcizelela amandla alo ekuvinjelweni kwezifo zenhliziyo. Kulolu cwaningo olunzulu, ososayensi bafika esiphethweni sokuthi ukukhishwa kwe-sitrobheli kunganciphisa i-oxidation ye-LDL, i-lipid peroxidation, ukukhuphula inani lamandla we-plasma antioxidant, futhi kulawule ukungalingani kwamafutha egazi kanye ne-glucose metabolism. Le berry inganciphisa cholesterol embi. Lokhu kubaluleke kakhulu kubantu abanokukhuluphala. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, ama-sitrobheli angathuthukisa ukuphendula kwe-glycemic, anciphise i-lipid peroxidation kanye nama -impawu okuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, umphumela wayo kwizinguquko emazingeni kashukela egazi ukhonjisiwe. Ama-Strawberry nawo kufanelekile kubantu abane-metabolic syndrome, ngenxa yamandla ayo okushintsha izinga lamafutha egazini futhi anciphise izinqubo zokuvuvukala. Izinto eziqukethwe ama-sitrobheli nazo zingalawula umfutho wegazi ophezulu kwiziguli ezinesifo sikashukela.
Ngokubheka okungenhla, singaphetha ngokuthi ukudla ama-sitrobheli onesifo sikashukela kungenzeka, futhi kudingekile! Ukulimala kwalo okulinganiselwe kufanele kunakwe kuphela kulabo abajwayela ukusabela komzimba ngenxa yokuqukethwe kwenani elikhulu lama-asidi ahlukahlukene.
Izinzuzo zikaVictoria Berry
I-Strawberry noma ingadi yama-sitrobheli inokwakheka okukuvumela ukuba kufakwe ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela. Izici ezibalulekile zifaka:
okuqukethwe kwekhalori okuphansi (30 kcal nge-100 g),
okuqukethwe okuphezulu kwefayibha yokudla, evimbela ukumuncwa kwama-carbohydrate emathunjini, okuvimbela ama-spikes abukhali kushukela wegazi (inkomba ye-glycemia ingu-32),
Amaminerali - i-magnesium, i-zinc, i-potassium, ithusi. Babamba iqhaza ekwakhekeni kwe-insulin, ibuyisele ithoni ye-vascular kanye nomfutho wegazi, bathuthukise ukuqhutshwa kokuthambekela kwenhliziyo ku-myocardium,
amavithamini C, i-beta-carotene, i-E - ayinkimbinkimbi yemvelo eyi-antioxidant, ngenxa yazo izindonga zemikhumbi ziba namandla okuhlala isikhathi eside, ukwakheka kwezigcawu ze-atherosclerotic kuvinjelwe, futhi umphumela we-antitumor uboniswa
Kubalulekile ukuthi izinto ezilandelwayo namavithamini zisesimweni esilinganiselwe, zingaphazamisi ukumuncwa komunye nomunye, okuvame ukutholakala lapho usebenzisa ama-synthetic vitamin amalungiselelo. Ama-100 g amajikijolo aqukethe ama-60 mg we-vithamini C, ohlinzeka ngama-75% esidingo sansuku zonke. Ukuhlushwa okukhulu kakhulu kumaqabunga. Ngakho-ke, kunconyelwa ukuwasomisa ehlobo ukuze ungeze ku-vitamin chai.
Futhi nakhu okwengeziwe nge-cherry kushukela.
Ngingakwazi ukudla ama-sitrobheli onesifo sikashukela
Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukufakwa kwama-sitrobheli kumenyu kuyasiza:
ukubambezela ukuthuthukiswa kwezinkinga zemithambo - izilonda ze-vascular (angiopathy), i-retina (retinopathy),
thuthukisa ukujikeleza kwegazi nokujikeleza, okuvimba i-polyneuropathy yemikhawulo engezansi,
khulisa ithoni ephelele nokumelana nezifo.
Iphinde ibe nomphumela omnene we-laureative diuretic, ekuvumela ukuthi ususe ngenkuthalo ushukela ngokweqile kanye ne-cholesterol emzimbeni. Izakhiwo ezilandelayo zamajikijolo zatholakala:
ukujwayezwa kwe-microflora yamathumbu,
ukumbiwa kosawoti we-uric acid,
ngcono ukwakheka kwegazi,
ukuphumula nokulwa nokuxineka
ukuphuculwa kwememori, ukuqonda (ukuqonda) umsebenzi wobuchopho (amandla okufunda, ukuhlaziya imininingwane),
ukubuyiselwa kwesifiso sobulili nokuqina kubantu besilisa, okwandisa ubulili kubantu besifazane,
ukunqandwa kwamafu we-lens, ukukhuphuka kokubonakalayo kweziguli esezikhulile,
ukuncishiswa kwekhanda nobuhlungu obuhlangene,
Ukuvinjwa kokuqina kwe-bile nokwakheka kwamatshe ayizimbi,
ukusheshisa ukuphulukiswa kwenxeba
umphumela wokulwa nokuvuvukala.
Ngezifo zezinso, ama-sitrobheli anomphumela obizwa ngokuthi yi-antimicrobial, ngenxa yalokho kunconywa i-pyelonephritis ehambisanayo.
Ukulimaza kubangelwa ngubani?
Kufanele uqaphele lapho udla amajikijolo eziguli ezitholakala zine:
i-eczema, i-dermatitis ye-atopic,
i-gastritis ene-asidi ephezulu,
isilonda se-peptic sesisu, i-duodenum,
i-pancreatitis engapheli noma eyingozi,
ukunganele kwesibindi noma ukusebenza kwezinso.
Bheka ividiyo mayelana nezinzuzo nezingozi zama-sitrobheli:
Ama-Strawberry ayalwa ukuthi angafakwa ngokuphelele ekudleni ngesikhathi sokuncelisa, ikakhulukazi enyangeni yokuqala ngenxa yobungozi bokungezwani nokudla. Ezinganeni ezincane, izithelo zinikezwa ekuqaleni kwenani lezicucu ezingama-3-5 futhi ukusabela kubhekelwe usuku. Uma ukulunywa kwesikhumba noma imivimbo, kwenzeka isikhumba, yeka ukusidla. Akunconywa ukuthatha imithi ngasikhathi sinye njengezithelo ze-sitrobheli, ikhefu kufanele okungenani libe yi-1 ihora.
Ungangena kanjani ekudleni
Abantu abanesifo sikashukela akufanele banciphise ama-sitrobheli. Ukukhonza okukodwa akumele kungabi ngaphezu kwama-250 g, futhi inani eliphelele ngosuku ngu-400 g. Amajikijolo aletha inzuzo ephezulu, efriziwe, futhi ikakhulukazi eyenziwe (compote, ujamu, ujamu) wokwelapha. Kubalulekile futhi ukuqeda ngokuphelele inketho yokuhlanganisa izithelo noshukela noma noju.
Ukutholwa okuhle kwamavithamini namaminerali, awudingi ukuhlanganisa ama-sitrobheli neminye imikhiqizo yokudla. Kungcono ukudla phakathi kokudla - ihora elilodwa ngaphambi noma amahora ayi-1.5 ngemuva. Lapho usebenzisa i-insulin, khumbula ukuthi i-100 g iqukethe 1 isinkwa unit.
Ukukhetha amajikijolo ekhwalithi
Ukusheshisa ukuvuthwa, amajikijolo avame ukuphathwa ngamakhemikhali. Kufakazelwe ukuthi lezi zihlanganiswa zinomphumela wesifo sikashukela. Lokhu kusho ukuthi:
zivuse ukuthuthukiswa kwalesi sifo kubantu abangatholwa,
kwanda umphumela wemithi ukwenza ushukela wegazi ube ngokwejwayelekile,
yehlisa ukuthikamezeka kwezicubu kwe-insulin,
Ngakho-ke, kudingeka ube nesibopho sokuthenga ama-sitrobheli, ikakhulukazi ezimakethe zemvelo. Ngokukhetha okufanele kwemikhiqizo kufanele:
shiya isivuno sokuqala, uma kungekho ukuzethemba okuphephile ngokuphepha kwaso,
unake iphunga - akumele kube khona ama-extraneous shades kuwo, ukungabikhona kwephunga eliphelele kuvame ukuba uphawu lokuphathwa ngamakhemikhali,
hlola izithelo - ukhipha uhlaza oluhlaza kufanele luhlale kwi-berry. Ubukhulu obukhulu, usayizi ofanayo wamajikijolo, isicwebezelisi esicwebezelayo nokungabikho komonakalo wangaphandle kuwumphumela womanyolo omkhulu enhlabathini
Ukuvimbela ubuthi bokudla, kunconywa ukugeza kahle ama-sitrobheli ngaphansi kwamanzi agobhozayo, ikakhulukazi lapho kusetshenziswa ngaphambi kwezingane.
Ama-Strawberry anokuqukethwe kwekhalori okuphansi futhi kusebenza kwimikhiqizo enenkomba ye-glycemic ephansi. Ngakho-ke, kuvunyelwe ukufakwa kwimenyu yokudla yeziguli ezinesifo sikashukela.
Futhi nakhu okwengeziwe ngamatamatisi kashukela.
Ukuthola umphumela wokwelapha, kunconywa ukungadli amajikijolo angama-400 g amasha ngesizini, ahlukaniswe ngemithamo emibili. Naphezu kwemiphumela eminingi ezuzisayo, kuyadingeka ukuthi ucabangele ukuphikisana nokusetshenziswa kwezithelo, ukubakhona kokungezwani. Ngenxa yengozi yokuphatha amakhemikhali, kufanele unake izimpawu zokusetshenziswa kwazo lapho uthenga.
Amajikijolo kushukela likhulu anomthelela omuhle kwizitho eziningi zomzimba. Kodwa-ke, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ngohlobo 1 nohlobo 2 ngokukhuluphala kunconyelwa ukuyisebenzisa iqhwa. Yisiphi isifo sikashukela esingavunyelwe? Yiliphi ibhele elinenzuzo kakhulu kushukela?
Udinga ukudla izithelo zeshukela, kodwa hhayi zonke. Isibonelo, odokotela batusa izinhlobo ezahlukahlukene 1 no-2, zesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe. Yini ongayidla? Yikuphi ukunciphisa ushukela? Yikuphi ngokwezigaba okungenakwenzeka?
Utamatisi ungabaza ushukela, noma kunjalo, izinzuzo zabo ziphakeme kakhulu kunokulimala okungenzeka, uma kukhethwe kahle. Ngohlobo 1 nohlobo 2, okusha futhi okusemathinini (utamatisi) kuyasiza. Kodwa kukhahlwe, usawoti onesifo sikashukela kungcono ukwenqaba.
Odokotela banesiqiniseko sokuthi ama-cherries anesifo sikashukela angaqinisa izindonga zemithambo yegazi, anikeze amavithamini. Kukhona izinzuzo hhayi kuphela kusuka amajikijolo, kodwa futhi kusuka amahlumela. Kepha kufanelekile ukukhumbula ukuthi ngokusetshenziswa ngokweqile kungenzeka ukulimaza. Yini engcono - cherries noma cherries sikashukela?
UKefir ukholelwa ukuthi unenzuzo enkulu kushukela. Ngaso leso sikhathi, ungaphuza hhayi kuphela ngefomu lawo elihlanzekile, kodwa futhi nge-buckwheat, turmeric ngisho ne-nettle. Izinzuzo zomkhiqizo zendlela yokugaya ukudla zinkulu kakhulu. Kodwa-ke, kukhona imikhawulo - ayinconywa ngezinkinga ezithile nge-gestational, ebusuku. Ukwelashwa kweKefir akunakwenzeka, ukunciphisa umzimba kuphela ngokukhuluphala.
Ungawususa kanjani u-sitrobheli noshukela?
Ama-Strawberry kashukela kufanele asetshenziswe njenge-snack phakathi kwesidlo sasekuseni nesidlo sasemini, noma isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Ungadli amajikijolo ekuseni esikhundleni sebhulakufesi, ngesisu esingenalutho.
Kungcono ukusebenzisa i-sitrobheli okusha, futhi akunasici - ngesimo sejamu noma ujamu. Esikhathini sikashukela, lokhu kwenqatshiwe. Kuvunyelwe ukungeza kumajikijolo ama-100 ml weyogathi yemvelo noma ubisi olubilisiwe olubhakwe, noma amantongomane enhlabathi.
Njengoba ama-sitrobheli amasha angatholakali unyaka wonke, esikhathini esingaphandle kwesizini angashintshwa namanye amajikijolo nezithelo, ngokwesibonelo:
Ama-Blueberries angenye i-berry enconyelwe iziguli ezinesifo sikashukela (ekwelashweni ongazisebenzisa hhayi kuphela izithelo, kodwa namahlamvu esitshalo, ukulungiselela i-infusions netiye le-herbal). Ama-Blueberries abhekana ngempumelelo nokulungiswa kwebhalansi kashukela egazini, ilungele iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma 2. Phakathi kwezimpawu eziwusizo zamajikijolo, umuntu angahlukanisa ngokukhethekile okulandelayo:
ukuqiniswa kwemithambo (kufaka phakathi i-ocular),
ukuthola kabusha kwamanyikwe,
ngcono izinqubo ze-metabolic.
Ngaphezu kwamavithamini namaminerali, ama-blueberries aqukethe ama-glycosides nama-astringents.
I-Watermelon - ivunyelwe ezigulini ezinesifo sikashukela, kodwa ngamanani amancane. Isibonelo, kuvunyelwe ukusebenzisa i-300 g ye-watermelon kathathu ngosuku (kuvela ukuthi ngosuku akukho ngaphezu kwekhilogremu). Kodwa-ke, awukwazi ukuyidla yonke ikhilogremu ngasikhathi sinye, ngoba i-watermelon pulp ine-index ephezulu ye-glycemic, engaholela ekhuphukeni okukhulu kushukela wegazi. Ngesifo sikashukela, lokho okubizwa ngokuthi yi-watermelon mono-kudla, okuthandwa kakhulu ngenkathi ye-melon, kuyenqatshelwa. Ngaphezu kwalokho, ngokubonakala kwamakhabe emashalofini, kufanele kungeniswe ekudleni kancane kancane, kusukela ku-200 g ngosuku. Ukusetshenziswa nsuku zonke kwe-pulp enamakha kuzosiza ukuthuthukisa uhlelo lokugaya ukudla, ukuthuthukisa imetabolism, ukuqinisa ukuzivikela komzimba.
Ama-cherries amnandi amajikijolo amnandi futhi anamanzi anconyelwe ukusetshenziswa yiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2. I-Cherry ingadliwa isha noma ifrithwe isitoreji sesikhathi eside. Ukwakheka kwamajikijolo kuyelapha ngempela:
i-ellagic acid, evimbela ukukhula kwamaseli womdlavuza,
ama-anthocyanidins asusa i-uric acid emzimbeni, futhi athuthukise ukukhiqizwa kwe-insulin ngamanyikwe,
izinto zokushuka ezisiza ukuqinisa imithambo yegazi nokwenza ngcono ukusebenza kwenhliziyo,
ukwakheka kukavithamini ocebile kanye namaminerali (ascorbic acid, fluorine, potassium, calcium, iron, chromium, njll.).
Akunconyelwe ukuthi kudliwe ama-cherries angaphezu kwama-100 g endaweni eyodwa ukugwema ukweqisa kwe-glucose ebukhali. Inani elifanelekile lemihla ngemihla lokuhlala alikho ngaphezulu kwezikhathi ezintathu. I-Cherry kanye nama-sitrobheli kashukela ngesikhathi sonyaka kufanele kudliwe nsuku zonke, ngokuyinhloko ngoba akhiwa ngezinto ezisiza ukuvimbela i-thrombosis. Isifo sikashukela i-mellitus sibonakala ngokubonakala kwegazi okuphezulu kanye nengozi yokuqhekeka kwegazi. Ngakho-ke, ukuze ungafaki izinkinga, kubalulekile ukufaka lawa majikijolo kwimenyu yansuku zonke.
Okusajingijolo wesifo sikashukela sohlobo 2 kunconywa ikakhulukazi - kungadliwa kusha, kufrize noma kumiswe. Ku-raspberries, kunenani elanele lama-acid acid asheshisa i-carbohydrate metabolism, futhi ngaleyo ndlela enza amazinga eglucose abe ngokwejwayelekile. Ngaphezu kwama-acid, ama-raspberries aqukethe i-fiber yokudla, amavithamini (A, E, PP, C), ama-phytosterols, izakhi zamaminerali, i-choline, i-tannin, i-pectin namafutha abalulekile. Ngaphezu kokusheshisa izinqubo ze-metabolic, ama-raspberries athuthukisa i-thermoregulation, aqinisa amasosha omzimba. Ngesifo sikashukela, ungadla isigamu sengilazi yama-raspberries amasha kathathu ngosuku, noma i-1 tbsp. l amajikijolo omisiwe (ungaphisa futhi uphuze njengetiye).
Ama-raspberry kanye nama-sitrobheli kashukela anconywe ngabezokudla kanye nama-endocrinologists. Lawa majikijolo anomphumela ophikisayo we-antioxidant nezinqubo ezivimbelayo zomzimba emzimbeni, weseka futhi ubuyisele izicubu - kufaka phakathi i-pancreas, ebhekele ukukhiqizwa kwe-insulin ngokuphelele.
Ama-apula eshukela awavunyelwe kuphela, kepha anconyelwe ukusetshenziswa. Kungama-apula akwaziyo ukugcina amazinga azinzile kashukela egazini isikhathi eside, avikele “ukugxuma” ngezikhathi ezithile kanye nokwehla. Ngaphezu kwalokho, izithelo zesihlahla se-apula ziyimithombo efanelekile ye-pectin nensimbi. Ukutholwa kuphela komphumela owelapha, ama-apula akufanele ahlolwe, ngoba aqukethe ama-antioxidants asizayo ukusiza ukujwayeza isimo sesiguli esinesifo sikashukela. Udinga nje ukuhlanza izithelo kahle ngaphansi komfudlana wamanzi afudumele (vele, ukusetshenziswa kwawo kungcono ukukhetha ama-apula "akho", esikhundleni semikhiqizo esitolo esisetshenzwe nge-silicone nangezinye izindlela).
Ama-Strawberry anezinambitheka ezinhle kakhulu nezimfanelo ezinhle. Futhi, ngaphandle kwalokhu, kunconyelwa iziguli ezinhlobonhlobo yesifo sikashukela. Lezi zithelo zombili ezisanda kufakwa nezineqhwa zinikeza umzimba nge-fiber ebalulekile, amavithamini kanye nama-antioxidants. Ukucwaninga kufakazele ukuthi ama-sitrobheli kushukela awumkhiqizo wemvelo obalulekile ongafakwa ngokuphephile ekudleni.
Ngabe iqukethe sitrobheli?
Asikho isidingo sokukhuluma ngezakhiwo zokunambitha zale bheri, wonke umuntu uyazi ukuthi imnandi futhi imnandi kanjani! Ake sixoxe ngezakhiwo zayo ezizuzisayo. Iqukethe:
Amavithamini afana nalawa:
IVithamini C (ascorbic acid) - ivuselela amasosha omzimba, i-antioxidant enamandla, iqinisa izindonga zemithambo yegazi.
IVitamin E (tocopherol) iyi-antioxidant, ibizwa nangokuthi "i-Vitamin yokuzalela", ngoba kubalulekile ngekhono lokukhulelwa emadodeni nakwabesifazane, futhi isiza nowesifazane ukuzala umntwana.
Amavithamini e-B abaluleke kakhulu ohlelweni lwezinzwa.
I-Folic acid yinto ebalulekile ekwakhekeni kwegazi. I-Folic acid ibaluleke kakhulu kwabesifazane abakhulelwe kanye nokuvinjwa kokungasebenzi kahle ezinganeni.
I-Potassium yinto ebaluleke kakhulu kwimisipha, kufaka phakathi inhliziyo. Ibandakanya ukulawulwa kwesilinganiso senhliziyo.
I-Magnesium iyiminerali ebaluleke kakhulu yezempilo yenhliziyo. Kwandisa ukubekezelelwa kwengcindezi.
I-calcium ibalulekile kuhlelo lwegazi lokuhlangana futhi, futhi, kumathambo namazinyo.
I-Fluoride - ithinta isimo se-enamel yezinyo, amathambo, izinwele nezinzipho.
I-Zinc - esetshenziselwa "impilo yamadoda", akusizi ngalutho ukuthi ama-sitrobheni abizwa ngokuthi yi-aphrodisiac yemvelo.
I-B-carotene - ilusizo esikhunjeni, embonweni nasekugomeni.
Isikhunta - ijwayelekile ukugaya, ivimbele ukuthuthukiswa kokuqunjelwa, isuse i-cholesterol kanye nobuthi.
I-Pectin - ibopha futhi isuse izinto eziyingozi emathunjini.
Lolu akulona uhlu oluphelele lwezinto eziwusizo.
Umphumela we-sitrobheli emzimbeni wesifo sikashukela
Ishukumisa amasosha omzimba futhi ilwe namakhaza.
Iwusizo ohlelweni lwenhliziyo.
Kuthuthukisa umsebenzi wepheshana esiswini.
Ivimbela ukuthuthukiswa kwamaseli wamathumbu.
Ithuthukisa ukunciphisa umzimba.
Ibambezela ukuguga komzimba.
Isiza ukwehla kwegazi.
Umphumela onenzuzo emzimbeni wowesifazane okhulelwe.
Ijwayelekile ukusebenza kohlelo lwezinzwa.
Inzuzo izolethela kuphela izithelo ezisezingeni eliphakeme. Ngakho-ke, kubalulekile ukuyikhetha kahle lapho uthenga. Khetha ibhulashi elingemnyama kakhulu (mhlawumbe liyadlula noma liqukethe ama-nitrate), kepha umbala obomvu obomvu. Nakisisa ama-ponytails, amaqabunga kufanele abe namanzi futhi aqhakaze, okusho ukuthi amajikijolo asanda kukhethwa. Imbewu yeConvex iwuphawu lwesithonjana esingavuthiwe. Futhi-ke, iphunga! Ukunambitheka kweStrawberry kufanele kuzizwe kukude.
Kuyaziwa ukuthi abanesifo sikashukela kufanele bagweme ukudla okunoshukela. Inkomba ye-glycemic yale berry ingama-32, futhi inani lekhalori liyi-kcal engama-41 kuphela.
Kungenzeka yini ukuthi udle lesi berry sikashukela, impendulo kungenzeka, kodwa ngokulinganisa! Ukuhlinzekelwa ngama-sitrobheli kuzonyusa kancane amazinga eglucose egazini, kepha kuzosiza isiguli sikashukela ukubhekana nesifiso sokudla okuthile okumnandi.
Ngasikhathi sinye, ukudla amajikijolo kuzosiza ukubhekana nezinkinga ezinjalo zesifo sikashukela:
Kunzima ukuphulukisa izilonda nesikhumba esomile, ngoba ama-sitrobheni aqukethe izinto eziningi ezinomphumela omuhle esikhunjeni,
isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo senhliziyo, ukuqina komfutho we-arterial. Ngoshukela, ubungozi balezi zifo bukhuphuka kakhulu, futhi i-berry elimnandi linomphumela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo,
ukukhuluphala, lokhu kubalulekile ikakhulukazi kuhlobo 2 sikashukela. I-Strawberry igcwalisa ngokuphelele indlala, ithuthukisa imetabolism futhi isiza ukubhekana nesifiso sokudla amaswidi ayingozi,
ukuvuvukala, ama-sitrobheli anomthelela wokugabha.
Contraindication ukusetshenziswa kwama sitrobheni
Ngaphandle kohlu olubanzi lwezinto ezizuzisayo, abanye abantu kusamele banciphise lo bhero omnandi.
Okokuqala, ama-sitrobheli kufanele akhawulelwe kubantu abanomzimba omubi, ngoba yi-allergen eqinile.
Kungcono futhi nokukhawulela ama-sitrobheli ngesikhathi sokuqothuka kwezifo zesisu, ngoba leli bheri lisebenza ngokukhulu ukucasuka kulwelwesi lwama-mucous ngenxa yama-asidi aqukethe kulo.
Ngabe leli berry kufanele lisetshenziswe kusiphi isimo sikashukela?
Umuntu onesifo sikashukela angadla inkomishi eyodwa yama-sitrobheni ngosuku. Ngokungangabazeki, kungcono ukuyisebenzisa isanda kuvela. Kepha kwesinye isikhathi ufuna ukuguqula imenyu ngokuthile okusha. Ukuze wenze lokhu, kunezindlela eziningi zokupheka zama-dessert ahlukahlukene:
I-yoghurt yeStrawberry ngaphandle koshukela.
Ushizi wekotishi enama-sitrobheli namantongomane.
Kukhona nezindlela zokupheka zokupheka i-sitrobheli ngaphandle koshukela, ngokususelwa kwi-gelatin noma i-agar-agar.
Ama-salads wezithelo ayoliswe ngeyogathi engafakiwe.
Njengoba ukwazi ukukubona esihlokweni, kubantu abanesifo sikashukela, ama-sitrobheni azosizakala kuphela uma uwusebenzisa ngokulinganisela. Ngemuva kwalokho le berry izonikeza isimo esihle futhi ilethe izinzuzo eziningi, ngaphandle kwethonya eliningi emazingeni kashukela. Yiba nempilo!
Ama-Strawberry kanye nohlobo 2 sikashukela
Ngesifo sikashukela, i-metabolism iyaphazamiseka, futhi odokotela, ngaphezu kokwelashwa kwezidakamizwa, banquma imisebenzi ethile yomzimba nokudla okufanele. Empilweni yomzimba, izithelo nemifino emisha kudlala indima ebalulekile. Kodwa ingabe ama-sitrobheli azokhulisa ushukela egazini lesiguli futhi alimaze? Odokotela bathi isebenza kahle emzimbeni wesiguli futhi ibale namazinga kashukela.
Ngingakwazi ukudla ama-sitrobheli onesifo sikashukela sohlobo 2? Iba yi-antioxidant enamandla yeziguli ezinalesi sifo, iwagcina kahle ama-membrane amaseli futhi azisindise emiphumeleni elimazayo edalwa yi-oxidation enzima. Ngenxa yakhe, amandla okulwa nokuvuvukala ayasebenza emzimbeni.
Ukwakheka kuqukethe amavithamini amaningi, ama-antioxidants kanye nezakhi zomzimba. Ama-Strawberry anesifo sikashukela sohlobo 2 ayasebenziseka, ngenxa yomthelela omuhle emzimbeni, kwehlisa ushukela.
Ama-Strawberry, izinzuzo kanye nokulimala kwesifo sikashukela
Kungekudala kakhulu, odokotela bayenqabela abanesifo sikashukela ukuba bayisebenzise, ​​noma kwakucaca kuwo wonke umuntu ukuthi ngokungayikudli ekudleni, umuntu wayencishwa izinto eziningi eziwusizo angazithola ngokudla ama-sitrobheni. Kwakuvinjelwe ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu lama-carbohydrate ekwakhiweni kwalo - 7.7 g. Namuhla, ochwepheshe bathi lesi sithelo siyakwazi ukuvimba izinkinga ezahlukahlukene zesifo sikashukela i-mellitus futhi akubangeli ukulimala uma sisetshenziswa kahle.
Ama-Strawberry anenkomba encane ye-glycemic - 32, ngenxa yokuthi idluliselwa kwimikhiqizo evela ohlwini oluphephile. Ngakho-ke ungadla kangakanani ama-sitrobheli onesifo sikashukela sohlobo 2? Umthamo ophelele wansuku zonke akufanele udlule ku-60 g, futhi kufiseleka ukuthi musha. Kunama-kilojoule ambalwa kakhulu kuwo, ngakho-ke abathandi balesi sibiliboco abakwazi ukukhathazeka ngenzuzo yesisindo: i-100 g iqukethe ama-36 kcal.
Uma isiguli singeqi umthamo wansuku zonke, khona-ke ukudla ama-sitrobheni ezigulini ezinesifo sikashukela kuzohlomula kuphela. Kepha uma kuyinto jam noma compote, khona-ke imikhiqizo enjalo ingaba yingozi. Ngemuva kokulashwa okushisa kanye nokwengeza ushukela, balahlekelwa ngamavithamini futhi bathola umthamo omkhulu wama-carbohydrate angagaya kalula. Odokotela abayincomi imikhiqizo enjalo.
Akumele sikhohlwe ukuthi ama-sitrobheli allergenic, futhi uma kudliwe ngamanani amakhulu, okungukuthi, kunethuba le-edema, i-urticaria, futhi kwezinye izimo ukushaqeka kwe-anaphylactic.
Izinto ezinenzuzo eziqukethwe kuma-sitrobheli
Ama-Strawberry alungele uhlobo 2 sikashukela, kepha anhlobo luni lwezinto? Iningi lamavithamini C litholakala kuma-sitrobheli nakuma-raspberries, ngokungafani nenkolelo evamile yokuthi ulamula ucebe kakhulu kuwo. I-Strawberry iqukethe kakhulu le antioxidant enamandla kangangokuba yi-100 g yomkhiqizo kuphela eyokwenelisa ngokuphelele ukuthathwa komuntu kwansuku zonke. Futhi inenqwaba ye-folic acid, ethinta kahle izitho zombono, imithambo yegazi, izinzwa, futhi ithuthukisa nokugomeka. Kunezinto eziningi ezilusizo kuma-sitrobheli, njenge:
Ngaphezu kwalezi zinto eziwusizo kubantu, ama-sitrobheni amasha aqukethe inani elikhulu lamavithamini. Ineqembu lonke lamavithamini B, kanye ne-A, PP, E, N.
Isifo sikashukela singakugwema kanjani ngokudla ama-sitrobheli
Ayikho i-berry engaqhathaniswa nama-sitrobheli ngokuya ngokubaluleka kwempilo yabantu ethela izithelo ezintsha. Umbuzo uwukuthi, kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli, ngesifo sikashukela kunyamalale wodwa. Wenza kuye ngendlela yokuthi aze abuye nezinkinga ezinkulu ezifana nalezi:
I-atherossteosis kanye ne-hypertension. Ama-Strawberry enza ngokwejwayelekile ibhalansi yama-electrolyte, aqeda umswakama owedlulele, ngenxa yalokhu, umthwalo omningi ususwa emithanjeni nasenhlizweni, futhi angasebenza ngokujwayelekile.
Izifo zegazi: ukuhluleka kwenhliziyo, i-anemia yokuntuleka kwe-iron kanye nomdlavuza. Ngenxa yokuthi kuma-sitrobheli inhlanganisela ephumelele kangaka yensimbi ne-Vitamin C, ukwakheka kwegazi okujwayelekile kwenzeka.
Izifo ze-larynx kanye nomgogodla womlomo: i-laryngitis, i-stomatitis, i-tonsillitis. Ama-Strawberry yi-antiseptic enokuqukethwe okuphezulu kwe-salicylic acid, iyi-antipyretic enhle kakhulu.
I-Neuralgia. Ososayensi bathole ku-sitrobheli into ebaluleke kakhulu ohlelweni lwezinzwa oluphakathi neFisetin, imvamisa kutholakala kumawayini abomvu.
Isifo samathambo I-Strawberry, ngenxa yekhono layo lokususa usawoti omningi emzimbeni, iphatha ngokuphelele izifo ezihlangene zokuvuvukala.
Akungatshazwa ukuthi ama-sitrobheli ohlobo 2 lwesifo sikashukela angumkhiqizo ophephile, onempilo onempilo.
Yize ama-sitrobheli ewusizo kakhulu, kepha wona, njengayo yonke imikhiqizo, anokuphikisana okuthile okufanele kubhekwe lapho kudliwa lesi sithelo esimnandi. Akunakudliwa ezimweni ezinjalo:
Uma umuntu enokungezwani komzimba.
Kulabo abenamatshe enyongo namatshe ezinso. Uma isetshenziswa ekudleni, kungaphuma itshe, ngenxa yalokho kuvela kwe-renal noma hepatic.
Ngezifo zomgudu wokugaya ukudla.
Ama-Strawberry akufanele anikezwe izingane ezincane ezingaphansi konyaka owodwa.
Futhi kubuye kubhekelwe labo bantu abathatha izidakamizwa ezisehlisa umfutho wegazi.
Ama-Strawberry anesifo sikashukela sohlobo 2 kwesinye isikhathi angaqedwa futhi angabi mantsha. Ukusuka kulo ungenza ama-dessert amaningi omnandi, ophaya, amajusi kanye nemicu. Kuphela lapho ushukela wabo wokulungiselela ungafakwa, kepha kulokhu kufanelekile, kungaba bobabili bemvelo nokwenziwa. Vele, akukho okungaba ngcono kunesithelo esisha. Ama-Strawberry wesifo sikashukela angumkhiqizo owusizo futhi omnandi, futhi kwesinye isikhathi ungaziphatha, ngokwesibonelo, ngephayi elusizo elinje:
Udinga ukuthatha izinkomishi ezi-2 zikafulawa we-rye.
Ukhilimu omuncu, isigamu sengilazi (kufanele kube-okungewona amafutha).
Amafutha omnqumo ngenani le-2 tbsp. nezinkezo (uma kungenjalo, khona-ke kungenzeka nemifino).
Isoda lokubhaka nezinkezo.
Konke lokhu kufanele kuhlanganiswe kahle, bese ukhipha inhlama. Beka isisindo esivele ephepheni lokubhaka bese uqala ukubhaka. Ngemuva kokuthi ikhekhe liphekwe, kuyadingeka ukuyithululela ku-blender, emhlabathini ngama-sitrobheni, kuhlanganiswe no-ukhilimu omuncu, bese ufaka okunye esikhundleni sikashukela.
Ukubuyekezwa kwabanesifo sikashukela nodokotela mayelana nama-sitrobheli
Ingabe i-sitrobheli isilungele ushukela? Ezinye iziguli zikholelwa ukuthi akufanele zidliwe ngoba zimnandi. Baqinisekile - ama-sitrobheli azokhulisa amazinga kashukela wegazi, futhi enqabe ngokuphelele ukusebenzisa lesi sithelo esimnandi nesinempilo. Abanye bayaqiniseka ukuthi akukulimazi futhi bakwemukele ngenjabulo njengoba udokotela ebayalele.
Eqinisweni, ochwepheshe kade bafunda ukuthi ama-antioxidants asetshenziswa yiwo wonke umuntu onoshukela omningi, futhi odokotela bathi leli beri limane nje libalulekile kulabo abahlushwa yilesi sifo. Ngemuva kwakho konke, ama-antioxidants asusa ngokuphelele izinto ezinobuthi ezinqwabelene kuwo emzimbeni, futhi ngenxa yazo, izinga loshukela liyancipha. Ama-Strawberry ayakwazi ukuvimbela ukwanda kwawo futhi athuthukise izinqubo ze-metabolic.
Umuthi wesimanje sekuyisikhathi eside ufinyelela esiphethweni sokuthi le berry iyasiza kwabanesifo sikashukela. Kepha ungadla malini ama-sitrobheli onesifo sikashukela? Ukusetshenziswa kwayo kufanele kube kokulingene, kungabi ngaphezu kwama-60 g ngosuku. Le ndlela ejwayelekile iyilandelwa.